Ngokusho kokukhangisa kwe-MDG, i-37% yabasebenzisi be-Facebook bazibandakanya ngokugcwele nokuthunyelwe okunesithombe esifakiwe; kanye ne-67% yamakhasimende athi ikhwalithi yesithombe somkhiqizo iyabasiza ukuthi banqume ukuthi bawuthenge noma cha. Enye yezizathu zokuthi amasayithi anjengePinterest adume kakhulu ukuthi abantu bathola izithombe zihlanganyela. Cishe uke wezwa kuthiwa isithombe “singamagama we-1000”. Lokhu kuyiqiniso ngoba abantu baqhutywa ngumbono.
Ukubaluleka kwesithombe – i-67% yamakhasimende athi ikhwalithi yesithombe somkhiqizo iyabasiza ukuthi banqume ukuthi bawuthenge noma cha. I-infographic egcwele lapha.
Ngenkathi izivakashi zakho zesayithi ngokuqinisekile zingalindele ukubona izithombe kuphela lapho zivakashela ibhulogi yakho, impumelelo yezithombe ezisekwe ezithombeni ku-Facebook, Twitter nakuPinterest ikufakazela ukuthi boubhouhoubhouhouhoubhouhouhouhoubhouhouhoubhouhouhoubhouhouhoubhouhouhoubhouhoyibhouhouhhufhouhuhufhouhuhuhuhubhufu.
Abaningi odala σε ethile, kubhekwa njenge-copyright. Ngokuqinisekile, ungakwazi ukubhalisa in ne-US Copyright Office ukuze uthole ukuvikeleka okwengeziwe futhi nekhono lokuthola noma iyiphi inzuzo elahlekile, kodwa uma uyidala, στο ingeyakho.
Lapho abanye abanikazi bewebhusayithi bethola ubunzima ngezithombe ukuthi bamane basesha ukusesha okuthi “izithombe zezinja ezinhle” bese bekopisha isithombe sokuqala abasibonayo ukuthi bayasithanda. Kodwa-ke, isithombe kungaba yinye umthwebuli wezithombe angafisi ukusaba kwamanye amawebhusayithi. I-copyright yakhe isanda kwephulwa.
Izithombe Zesidlangalaleni Zomphakathi (njengeziningi ezinqolobaneni zo Hulumeni zase-US, kodwa njalo zihlole kabili ukuthi ungayisebenzisa)
Izithombe ze-Stock zivame ukuba yizinga eliphezulu kakhulu. Ναζί ezinye izayithi ezinikeza izithombe zesitokwe ezithengiswayo:
Uma umthwebuli wezithombe uthi ungasebenzisa isithombe, gcina i-imeyili endaweni ephephile uma kwenzeka kukhona umbuzo mayelana nokuthi uvumelekile ukuyisebenzisa.
Ukusetshenziswa okulungile kuwela ngaphansi kwe-Copyright Act (Isihloko 17 sekhodi yase-United States) futhi kunesimo sokuhlolwa kwe-litmus ngezici ezine zokunquma ukuthi kulungile yini ukusebenzisa ingxenye yomsebenzi we-copyright. Ngokuyinhloko, uma umsebenzi ujwayele futhi umuntu uyisebenzisa esimweni esingokomlando, bese usebenzisa ingxenye yayo kungase kube efanele. Kodwa-ke, kuyinkimbinkimbi futhi ungase uphathe iphutha ngokuthi ngabe ukusetshenziswa kulungile yini noma cha futhi kuphephile enkingeni yomthetho.
Ngokusho kweHovisi le-πνευματικά δικαιώματα, lezi zici ezine ziyi:
yena uhlobo lomsebenzi πνευματικά δικαιώματα
umphumela wokusetshenziswa emakethe okungenzeka, noma ukubaluleka komsebenzi εμείς-πνευματικά δικαιώματα
Ukusetshenziswa okulungile kufinyelela ekudlalweni okuningi ngombhalo obhaliwe. Isibonelo, uma ufuna ukucaphuna kulesi sihloko, ungase ufake i-quote emfushane bese uyikweleta. Nasi isibonelo:
Esihlokweni se-WHSR esithi "Ungayisebenzisa Le Sithombe; Ukuqonda Ukusebenzisa Okuhle nokuthi Yiziphi Izithombe Angeke Zisetshenziswe Ngokusemthethweni Kubhulogi Lakho "nguLori Soard, uyeluleka," Uma lo φωτογράφος ethi ungasebenzisa isithombe, gcina i-imeyili endaweni ephephile uma kwenzeka kube khona umbuzo mayelana nokuthi ngabe uvunyelwe ukuyisebenzisa. "
Uma kukhulunywa ngezithombe, kungcono kakhulu ukunamathela ngezithombe zasebukhosini zamahhala nezesizinda somphakathi. Awukwazi ukusebenzisa ingxenye encane yesithombe futhi kunzima ukwazi ukuthi yikuphi ukusetshenziswa okuhle nokungenakwenza. Akufanele ngempela ukufaka engcupheni impi ende yezomthetho, edonswa lapho kunezithombe eziningi kakhulu ezingasetshenziswa ngaphandle kokukhathazeka.
Ngokusho kochwepheshe bezithombe abaqeqeshiwe baseMelika, i-copyright iyilungelo lomhlaba. Ukwengeza, isayithi ithi, "Izithombe zokuphula umthetho-copyright ngaphandle kwemvume-zingabangela άδειαhlawulo zomphakathi nezomthetho."
Ungenza konke okulungile futhi usebenzise amasayithi kuphela abhalisa Creative Commons izithombe, izimfanelo njengezicelo zobunikazi be-copyright futhi usathola inothi kusuka kumthwebuli wezithombe ngosuku olulandelayo usebenzisa isithombe sabo ngaphandle.
Okwesibili, uma i-φωτογράφος icela yona, masuse isithombe ngokushesha. Mbuyisela emuva nge-imeyili uphinde uchaze ukuthi ulayishe isithombe ku-X usuku futhi kunikezwe njengoba kushiwo, kodwa usithombe.
Χλονίπα. Kungenzeka ukuthi othile uthathe isithombe sakhe kuqala noma ukuthi umane nje ukhohlwe ukuthi uyinikele ngomsebenzi. Umthwebuli oyedwa ongathatha izithombe angathatha izinkulungwane zezithombe ngonyaka futhi kunzima ukuhambisana nabo bonke.